MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa shalay (9-dii October), ku qaabilay Xafiiskiisa Qurba-joog kusoo lug go'day Shirkii fashilmay, ee arrimaha dib-u eegista Dastuurka.
Qurba-joogtan, oo ka kala yimid Waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Australia, ayaa lagu casuumay Shir ay soo qaban-qaabisay Wasaaradda Dastuurka, oo la filayay inuu ka furmo Muqdisho Axadii lasoo dhaafay.
Madaxweynaha ayaa uga cudur-daarey Wasiir Xoosh Kulanka uu kusoo casuumay, ee qabsoomi waayay. Wasiirka ayaa qaban-qaabiyay Shirka, isagoo kala tashan Gudiyada Dastuurka iyo maamul goboleedyada, sidaasi darteedna uu ku fashilmay.
Wasiirka Dastuurka, Cabdi Xoosh Jibriil, ayaa dadkan ugu yeeray Shir aan la isku raacsaneyn qabashadiisa, kaasi oo ay ku gacan-seyreen Maamullada dalka, Labada Golle ee Baarlamaanka iyo Gudiga madaxa-banaan, ee Dib u eegista Dastuurka.
Dadka Somalida ah ee ku nool dalka dibadiisa intooda badan ayaa inta badan muhiimad gaar ah siiin sharciyada kulamada kuwasoo fursado gaar u ah ka eegta.
Qurba-joogta ayaa inta badan lagu casuumaa shirarka ay qabtaan Wasaaradaha Xukuumadda Federaalka, iyagoo iska eegin waxa ay u imaanayaan inay dan ugu jirto mustaqbalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa shan safar oo dibadda ah sameeyay bishan gudaheeda iyadoo...